ဆူရှီအကိတ်ကြီးတွေနဲ့ ဂျပန်စာကောင်းကောင်းလေးတွေရနိုင်မယ့် Sushi Mikado – FoodiesNavi
ဆူရှီအကိတ်ကြီးတွေနဲ့ ဂျပန်စာကောင်းကောင်းလေးတွေရနိုင်မယ့် Sushi Mikado
By yin sandi On April 27, 2018 0
အဆာပြေပဲစားစား အဝပဲစားစား အမှန်တကယ်ဗိုက်ကားစေတဲ့ ? ဆူရှီကို ပြည့်ပြည့်ဝဝစားချင်တဲ့ foodies တိုင်း ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာဆူရှီဆိုင်တွေအများကြီးရှိပေမယ့် တကယ်တန်ပြီးပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ ညီမျှတဲ့အရသာရရှိဖို့ကလည်း လိုသေးတယ်ဆိုတော့ Foodies Navi ကနေ လူကြိုက်များပြီး Review ကောင်းကောင်းလေးတွေရထားတဲ့ Sushi Mikado ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကို လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ ?
ဒီဆိုင်လေးမှာတော့ ဆန်သားအိအိလေးတွေကို လတ်ဆတ်တဲ့အသားငါး ၊ အရွက်အသီးတွေနဲ့ ရောပြွမ်းပြီးသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းနဲ့အပြည့်စားလို့ရအောင် sushi လေးတွေကို အကိတ်ကြီးတွေပြုလုပ်ပေးတာဆိုတော့ ? တစ်လုပ်ဝါးလိုက်ရုံနဲ့ ရှယ်တွေခံတွင်းတွေ့ပြီး ? အာဟာရဓာတ်တွေပြည့်ဝသွားသလို ? ခံစားသွားရစေမှာပါ။ ဂျပန်စတိုင်ဆူရှီကြိုက်သူတွေအတွက်ကတော့ လုံးဝအရွေးမမှားမယ့်ဆိုင်ကောင်းလေးပါ။ ဒီလိုမျိုး ပူလောင်အိုက်စက်နေတဲ့ နွေပူပြင်းကြီးမှာဆိုရင်တော့ ? ရေခဲမှုန့်လေးတွေကပ်တွယ်နေပြီး တစ်မျှင်ချင်းစီကကို လတ်ဆတ်အေးမြတဲ့အရသာတွေ ခံစားရစေတဲ့ Chukawakame (ရေညှိသုပ်) ၊ အိအိဆိမ့်ဆိမ့်အရသာလေးကြောင့် လူကြိုက်များနေတဲ့ Jelly Fish လေးတွေကို အရသာပေါ်လွင်အောင်သုပ်ပေးထားတဲ့ ရေခူသုပ် ၊ Tempura အရည်လေးတွေနဲ့တို့စားရပြီး ရေခဲတုံးလေးတွေပေါ်မှာ စီးစီးလေးနဲ့နူးညံ့နေတဲ့ ခေါက်ဆွဲသားလေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် ရင်ကိုအေးမြပြီးဗိုက်ကားသွားစေမယ့် Soba (ဂျပန်ပန်းဂျုံခေါက်ဆွဲအေး) ၊ လတ်ဆတ်ချက်က သြချရလောက်တဲ့ တူနာသားမွမွလေးတွေကိုသုံးထားတဲ့ အအေးစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ tuna Sashimi စတဲ့ဂျပန်စာလေးတွေကိုလည်း ဆူရှီလေးတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီး စားသုံးနိုင်ဦးမှာဖြစ်သလို တခြား menu တွေအများကြီးလည်း ကျန်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်သွားစားကြည့်မှပဲ တဝကြီးမြည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပါတော့နော်။
ဆိုင်လိပ်စာကို foodies တွေတော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် သတိမထားမိသေးတဲ့ foodies တွေအတွက် ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၁၆၂) ၊ စမ်းချောင်းလမ်း(ကမ္ဘောဇဘဏ်အနီး) ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ ⏰ နေ့လည်(၁၁)နာရီကနေ ည(၉)နာရီခွဲအထိဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ထိမသွားဘဲ အိမ်မှာတင်သုံးဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Yangon Door to Door ကနေမှာယူလို့ရပါသေးတယ်။ တစ်သောင်းကျပ်အထက်ဆိုရင် Free Delivery ဆိုတော့ အိမ်မှာတင်ဇိမ်ကျကျနဲ့ ရှယ်ဆွဲဖို့အတွက်လည်း အဆင်ပြေတယ်နော်။
Image Source : www.facebook.com/sushimikado
ရှယ်တန်ပြီးရှယ်ကောင်းတဲ့ ပင်လယ်စာကို ရှာဖွေနေတတ်တဲ့ အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက်
ကိုလာနံ့သင်းသင်းလေးမွှေးတဲ့ ကိုလာကြက်တောင်ပံကြော်လေး လုပ်စားရအောင်